नगरबासीहरु आफ्नो योग्य नेतृत्व चयन गर्न आतुर छन्, जीत माओवादी केन्द्रको हुन्छः फुयाल (भिडियो ) | KTM Khabar
२०७३ चैत्र २ गते १२:०७ मा प्रकाशित
बैशाख ३१ को दिन तोक्दै सरकारले स्थानिय चुनाबको घोषणा गरि सकेको छ । यो संगै अहिले धेरैको ध्यान स्थानिय चुनावमा नै केन्द्रित भई रहेको छ । विभिन्न पार्टीका नेताहरु चुनाबि माहोलमा हुमिरहेका छन । यसै सन्दर्भमा केटिएम खबर डट कमले अबको चुनाबमा कस्तो उम्मेदवारलाई छान्ने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष बहसका कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ ।
अबको स्थानिय चुनाबमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको भुमिका कस्तो छ ? भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रका केन्दिय सदस्य एवं पार्टीका नगर संयोजक महेश्वर फुयालसंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
यत्ति बेला यहाँहरु स्थानिय चुनाबमा केन्द्रित भएर आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई बढाई रहँनु भईरहनु भएको छ र यसमा यहाँको पार्टीको भुमिका बारे प्रष्ट्याइ दिनु न ?
करिब १९ बर्ष पछि स्थानिय चुनाबको निर्बाचनमा हामी सहभागि हुँदै छौँ । २०५४ सालमा स्थानिय चुनाब भए पछि स्थानिय निर्वाचन हुन सकिरहेको थिएन । अहिले हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा यही सरकारको पहलमा स्थानिय निर्वाचनमा हामी जान खोजि रहेका छौँ ।
हामीलाई थाहा छ लामो संघर्ष पश्चात हामीले जुन उपलब्धिहरु हासिल गर्यौँ । त्यो उपलब्लिाई संस्थागत गर्दै हामीले निर्माण गरेको संबिधान कार्यन्वयनको एउटा कडि पनि हो स्थानिय निर्वाचन तसर्थ यो निर्बाचन एउटा समान्य औपचारिक निर्बाचन मात्र नभई यो संबिधानलाई कार्यन्वयन गर्ने ऐतिहासिक निर्बाचन हो । यसलाई सफल गराउनका निम्ति निष्पक्ष, पारदर्शिता र स्वतन्त्र ढंगले निर्बाचन सम्पन्न गराउँनका निम्ति हाम्रो पार्टीको पुरा ध्यान अहिले स्थानिय निर्बाचनमा केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ ।
नगरबासीहरुका लागि यहाँहरुको पार्टीले आफ्नो औचित्यता कसरी प्रस्तुत गरेको छ ?, के पाउँनु हुन्छ ?
पहिलो कुरा ऐतिहासीक रुपमा नै हामीले परिवर्तनका निम्ति पटक पटक संघर्ष गरेको एउटा ऐतिहासीक बलिदानिको प्रक्रियाबाट हामी अगाडी बढेको हाम्रो सबै नगरबासीहरुलाई थाँहा छँदैछ ।
दोश्रो कुरा हामी नगरको विकासको निम्ति हामी अत्यन्तै समर्पण भावका साथ लागेका छौँ । हामी यो पछिल्लो संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात राजनितीक रुपमा चुनाबि परिणामको जुन क्षति ब्यहोर्नु पर्यो । त्यसलाई पनि आत्मसाथ गर्दै हामी कसरी जनतासंग नजिक हुन सकिन्छ ?, कसरी नजिक बनाउँन सकिन्छ ? अथवा कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ ?, कस्ता खालको योजना लिएर जाने ? भन्ने विषयमा हामी आन्तरिक रुपमा र बाह्य रुपमा त्यत्ति कै सक्रिय रुपमा लागिरहेका छौँ । हाम्रो सांगठनिक रुपमा भएका कतिपय कमजोरीहरुलाई पनि सच्याउँदै आम जनतासंग जोडिने विशेष गरी भित्री काम र बाहिरी काम जुन पार्टी भित्र संगठनलाई व्यबस्थित गर्ने र बाहिर जनतासंग जोडिएका जनसरोकारका विषयहरुमा हामीले आफुले सदैव अग्रपक्तिमा आएका छौँ । तसर्थ हामीलाई के विश्वास छ भने अबको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा हामी जीत हासिल गर्छौँ ।
यहाँको पार्टी अध्यक्ष सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यसमा यो चुनाबमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?, के महशुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
यत्तिबेला माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । यही सरकारले स्थानिय निर्वाचनको घोषणा गरि सकेको अबस्था र निर्बाचनका लागि पनि अनुकुल वाताबरण पनि बन्दै गइरहेको छ यद्यपी मधेसवादी दलहरुको केही असहमती छन् तथापी उहाँहरु स्वयं पनि आफ्ना असहमतिहरुलाई थाति राख्दै स्थानिय निर्बाचनमा आउने स्थिति देखिन्छ । यो अत्यन्तै सुखद पक्ष हो । आम जनतामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पनि परिरहेको छ । माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा माओवादी पार्टीको काम सकारात्मक रुपमा आउँछ भन्ने कुरामा जनता पनि एक खालको विश्वसनियतता देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा भर्खर भएको स्वबियु निर्वाचनमा पनि विशेष गरी नयाँ पुस्ताहरु अझै पनि परिवर्तनका पक्षमा छन । माओवादी आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै यसलाई अझ अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षको पुष्टि गरिसकेको छ ।
यतिबेला सरकारमा भएर निर्वाचन गर्न पाउनु यो माओवादी पार्टीका लागि एउटा राम्रो संयोगको कुरा पनि हो ।
यहाँहरु स्थानिय चुनाबको तयारीमा लागि सक्नु भएको छ तर यता–कता चुनाब हुन्छ, हुँदैन भन्ने दुविधामा रहेका व्यक्तिहरुको जमात पनि भेटिन्छ, के महशुस गरिरहनु भएको छ ?
लामो समय पश्चात स्थानिय निर्वाचन हुन नसकिरहेको अवस्थामा यत्तिबेला हामी स्थानिय निकायको चुनबमा जान गइरहेका छौँ र चुनाब हुन्छ, हुदैन भन्ने अड्कल काट्ने भन्दा पनि स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणासंगसंगै आम मानिसहरुमा एउटा उत्साह नयाँ खालको उत्प्रेरणा र नयाँ खालको जोश जागर पलाएको आएको मैले देखेको छु । यत्ति खेर हाम्रा नगरबासिहरु आफ्नो नगरको योग्य प्रतिनिधीहरु छान्नका निम्ति आतुर छन । बैशाख ३१ कहिले आउँछ र हाम्रो योग्य नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने कुराको कौतुहलता, त्यो खालको आतुरी, हुटहुटी मैले आम नगरबासीमा देखेको छु ।
महेश्वर फुयालसंगको थप कुराकानी तथा भिडियो कुराकानीका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः